Accueil > Gazetin'ny nosy > Mama sôsy : Afabaraka ny governemanta
Mama sôsy : Afabaraka ny governemanta
Resaka be eran’i Madagasikara sy hatrany ivelany ny raharaha minisitra ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy(Mama sôsy) sady mpitondrantenin’ny governemanta momba ny adin’izy sy ny vadiny Andry Andriantongarivo ary ingahy mpihira Sayda. Ny alatsinainy 06 septambra 2021 nifoha talata no nitranga ity raharaha ity izay nitifiran’ingahy Andry Andriantongarivo an’ingahy Sayda mpanakanto sady mpikambana ao anaty kabonetran’ny ministeran’ny serasera ihany koa.
Mbola ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka ny polisy mpanao famotorana amin’izao raharaha izao ka tokony ho tohiziny hatramin’ny farany izany mba hahalalan’ny vahoaka ny tena marina amin’ity raharaha ity. Ny loharanom-baovao no milaza fa izy telo ireo dia samy nametraka fitoriana avokoa ny talata faha 08 septambra 2021.
Tsy ity raharaha Lalatiana Rakondrazafy sy ny vadiny ity ihany no nitondra fahafahambaraka tao amin’ity governemanta ity fa teo ihany koa ny raharaha Brice Randrianasolo izay voatendry ho minisitra nefa nohon’ny filazana tany amin’ny “facebook” fa manana fitondrantena tsy mendrika. Dia nasaina nanao fametraham-pialana ity olona ity efatra andro taorian’ny fielezan’izany vaovao izany.
Tsy ho tenenina intsony ny raharaha tany aloha tany izay efa nanesorana minisitra telo tao amin’ny governemanta nanomboka ny taona 2019 izay. Avy hatrany dia noesorina ireo minisitra ireo taorian’ny fiparitahan’ny vaovao. Fahafanbarakan’ny governemanta avokoa ireo rehetra ireo.
Mahakasika manokana ny fomba fiainana manokana ny olona mpitondra fanjakana dia mazava tsara ny lalàna fa tsy misy izany fiainana manokana izany( (Jereo ny lalàna mikasika ny serasera art 20 ). Hatrany ivelany dia azo lazain’ny fiainana’ny olona mpitondra rehefa voatohitohina ny fiainan’ny mpiara-belona toa ny raharaha DSK(Dominique Stroskan) filohan’ny FMI (Tahirimbola iraisam-pirenena), I Bill Cliton filohan’ny Etazonia tany Amerika tamin’ny raharaha Monica Lewinsky), ary mbola navoakan’ny gazety koa ny fisipan’I François Hollande filohampirenena frantsay sy sakaizany.
Hoan’ny fanjakana manaja ny soatoavina repoblikanina dia tokony hametraka fialana amin’ny minisitra ao amin’ny governemanta ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy (Mama sôsy) ity.